नेपाल आज | विकास गरेको गफ दिने गगन थापालाई चर्चित स्थानीयको झटारो
विकास गरेको गफ दिने गगन थापालाई चर्चित स्थानीयको झटारो
मङ्गलबार, २१ कार्तिक २०७४ गते प्रकाशित - नेपाल आज
हिजो मैले एउटा समाचारको लिङ्क सेयर गरेर टिप्पणी लेखेकी थिएँ, "समाचारको आधिकारिकता नाप्ने टुल्स छैन तर यसै भन्नुभएको भए, यस्तो गफ गरेर चुनावमा नहोमिएकै राम्रो!
टाढा जानु पर्दैन, यहॉको क्षेत्रको बाटो र त्यहॉ हुने सवारी जामको दूर्दशा हटाउने उपायसम्म निकाल्छु भन्नुभयो, भने पनि अहिलेलाई पत्याउन गाह्रो छ ।"
यो समाचार काँग्रेसका एक उम्मेदवारको बारेमा थियो । समाचारको सत्यताबारे सुरुमै संशय पोखेकी थिएँ र यदि त्यो सत्य थियो भने, त्यसो नगरे राम्रो हुन्थ्यो भन्ने आशय थियो।
तर त्यो स्टाटसलाई दिनभरी नै मलाई अर्ती/उपदेश दिइयो; कसै कसैले त 'त्यो डिलिट गरे हुन्न र ?' भनेर भन्नुभयो।
उक्त स्टाटसबारे म, व्यक्तिलाई खसालिएको, उडाइएको, आक्रोश पोखिएको देखेर झनै ती 'देवत्वकरण गरिएको नेता'बारे लेख्न मन लाग्यो।
१. दुई वर्ष अगाडि नाकावन्दीको समयमा सार्वजनिक यातायातका साधन कम चलेका थिए; सेतो ट्याम्पो यति भिड हुन्थ्यो कि १८ जनासम्म चढ्थ्यौँ। ढोकामा २/३ जनासम्म झुन्डिएर गएको अनुभव ताजै छ; लडिने डर हुँदैनथ्यो। बाटोको अवस्था राम्रो थियो।
तर अहिले त्यहि ट्याम्पोको सिटमा बसेर हिँड्दा पनि बाटोको खराब अवस्थाको कारणले दुई हातले च्याप्प समातेर बस्दासमेत पल्टिएला भन्ने डर हुन्छ।
यी सबै सर्वसाधारणले भोगिरहँदा ती 'देवत्वकरण' गरिएका नेताले सर्वसाधारण सुविधालाई ध्यानमा राखेर त्यो बाटो मर्मत र सुधारको लागि के गरे ? उनी यहि क्षेत्रको सभासद थिए।
२. केही महिना अगाडि चाबहिल क्षेत्रका जनताले धुलो र धुवाँ खप्न नसकेर बाटो रोके, चेतन पान्डे लगायतका दाजुभाइले लाठी चार्ज भोगे; त्यो बेला ती 'देवत्वकरण' गरिएका नेता कता थिए ? यसै क्षेत्रको सभासद हुँदाहुँदै पनि त्यसबारेमा बोलेको कतै सुनिएन त !
३. सरस्वती नगर - कपन बाटो खनेर भताभुङ्ग पारेर छाडेको यो कार्तिकमा २ वर्ष भयो। अझै पनि त्यो क्षेत्रको केही टूक्रा बाटो गाडीसमेत नचल्ने गरेर छाडिएको छ; त्यहाँका वासिन्दाको व्यापार चौपट भएको छ। धुलोले स्वास्थ्यमा पुर्‍याएको हानीको अहिले कुरै नउठाउँ; ती नेताले त्यहाँ पुगेर शान्त्वनासम्म दिएका छन् कि छैनन्, यहाँहरुको 'देवता नेता'सँग सोधेर सर्वसाधारणलाई जानकारी दिनुहोला।
४. चाबहिल, गोपिकृष्ण हल आदि क्षेत्रमा बसोवास गर्ने सर्वसाधारणले कतै जानु पर्‍यो भने गन्तव्य पुग्न अतिरिक्त समय १/डेढ घन्टा बाटोको लागि छुट्याउनुपर्छ।
कहिलेकाहिँ 'तीनचुली र जोरपाटी जाने' भनेर लेखेको ट्याम्पोको ड्राइभरले गौशालामा ल्याएर सबैलाई भन्छ/भन्छिन्, 'जाम छ, यहाँबाट उता जाँदैन, सबैजना यहिँ ओर्लिनुस् !'
उजूरबाजूर गर्ने ठाउँ वा निकाय कतै हुँदैन, हामी चुपचाप भिजेको बिरालो जसरी ओर्लन्छौँ।
त्यतिबेला पाजेरो वा त्यस्तै गाडी चढेर हिँड्ने ती 'देवता नेता'ले हामी जस्ताको दु:ख कतिपटक देखिदिएछन्, जानकारी दिनुभए राम्रो हुनेथियो।
अझ अहिले त तीनचुली र जोरपाटीसम्म ट्याम्पो विरलै जान्छ; सबैलाई चाबहिल ल्याएर ओरालिदिन्छन्। त्यतिबेला ती नेतालाई कता खोज्न जाऔँ, त्यो पनि भनिदिनुहोला।
५. ती 'देवत्वकरण गरिएका नेता'को क्षेत्रका केही वासिन्दाको घरको धारामा रोजै पानी आउँदैन। केही महिना अगाडि १४ दिनसम्म पानी आएन; केयुकेएल सँग पानी किन्न लाइन बस्नुपर्छ; त्यहि पनि भनेको दिन पानी ल्याइदिन गाह्रो हुन्छ। जेष्ठ नागरिकहरुमात्रै भएको घरमा कुनबेला धारा आउँछ र पानी चढाउँला भनेर रातको निन्द्रा र दिनका अनेक काम थाँति राख्नुपर्छ। त्यसबाट हुने मानसिक तनाव, शारीरिक थकान र अतिरिक्त खर्चको बारेमा ती 'देवता नेता'ले कहिल्यै सोच्ने र त्यस बारेमा आवाज उठाउने गर्नुभएको छ ? छ भने कृपया झर्को नमानी वर्णन गरिदिनुहोला !
भयो, अहिलेलाई यतिमात्रै लेखेँ; लौ, जति गाली गर्नु छ गर्नुस्; सक्नुहुन्छ भने तपाईँहरुका 'देवत्वकरण गरिएका नेताएलाई प्रश्न गर्ने हिम्मत गरेकोमा जेल मै कोचिदिनुस् ! किनकि, तपाईँहरुका 'देवत्वकरण गरिएका नेता जी' वा अरु नेता जीहरुले जितेछन् भने पनि सर्वसाधारणले पाउने वा आशा गर्ने यी र यस्तै कुराहरु हुन्। होला, तपाईँहरुमध्ये केही उहाँहरुका भात भान्सा र खोपीमै पुग्नुहोला, मीठो मीठो स्न्याक्सकासाथ मदिरापान गर्नुहोला; कोठेगफ चुट्नुहोला; कसैलाई खसाल्नुहोला; कसैको धुपौरे बन्नुहोला तर फेरि पनि भन्छु, आम भोटरले पाउने ( यदि गम्भिरतापूर्वक काम गरे भने ! ) र चाहने भनेको माथि उल्लेखित कुराहरु नै हुन्। चाहे ती नेता काँग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा ....जे जे हुन्।
माथिका प्रश्नहरु एउटा व्यक्ति वा नेतालाई गरिएको होइन, व्यवस्था र विकृतिमाथि उठाइएको आवाज हो।
अझै पनि म एउटालाई गाली गरेर यहाँहरुको आक्रोश शान्त हुन्छ भने यहाँहरुको ईच्छा पुगोस् !
मेरोलागि, ऐरे, खैरे, गैरे जो आएपनि केही छैन; मेरो भान्सा उनीहरुको चाकडी र मुलाहिजाले चल्ने होइन, मैले मेरो परिश्रमले पेट पाल्ने हो ।
तर बिषय वस्तुमाथि उठाइएको प्रश्नलाई त्यसै अनुसारले जवाफ वा कमेन्ट गर्नुहोला, व्यक्तिगत आक्षेप र गालीगलौजमा होइन।
तल्लै स्तरमा उत्रेर गालीगलौज गर्न त मैले पनि यहाँहरुबाटै सिकेकी छु; 'मुकुन्डो' लगाएर भलाद्मी बन्ने कोशिश गरेको पो त!